के तपाईंको सामग्री रणनीति उत्पादन, उपस्थिति वा प्राधिकरण हो? | Martech Zone
के तपाईंको सामग्री रणनीति उत्पादन, उपस्थिति वा प्राधिकरण हो?
शुक्रबार, मे 8, 2015 Douglas Karr
एक समानताहरू जुन म प्रायः मानिसहरूलाई भन्छु हाम्रो एजेन्सी के यो हामी मार्केटिंग होइनौं Jiffy Lube। हाम्रो काम तपाईलाई छिट्टै भित्र ल्याउन र बाहिर निकाल्नको लागि होइन, तपाईंको विन्डशिल्डमा एउटा स्टीकर फाल्नुहोस् र अर्को महिना तपाईंलाई भेट्नुहुनेछ। हामी धेरै खाडल चालक दलहरु हौं र पागलपनका साथ कार रेस को लागी तैयार छ। त्यहाँ धेरै Jiffy Lubes छन् - हामी तिनीहरू मध्ये एक हुन चाहँदैनौं।
यसले सामग्रीलाई सन्दर्भित गर्दछ, यी एजेन्सीहरूले तपाईंको लागि उत्पादन लाइन प्रदान गर्छन्। X प्रति महिना पोष्टको संख्या, ह्वाइटपेपरको X संख्या, X डलरको लागतमा इन्फोग्राफिक्सको X संख्या। सम्झौता सुरु हुन्छ र उनीहरूले उत्पादन गर्छन्। उनीहरूले परियोजनाको आउटपुट र समयबद्धतामा भुक्तान गरिरहेछन् कुनै ध्यान दिए बिना तपाईंले दौड जित्नुभयो कि हुन्न।
हामी यस कम्पनीका धेरै कम्पनिहरु देख्छौं यो रणनीतिका लागि - किनभने पहिलो - त्यहाँ एक टन प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरु बाहिर छन् जुन कामको स्थिर प्रवाह चाहान्छ र - दोस्रो - उनीहरुले आन्तरिक रूपमा सामग्री उत्पादन गर्न सकेनन र जान्दछन् कि उनीहरु हराइरहेका छन्। आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई। दुर्भाग्यवस, किनकि तिनीहरूले सामग्रीको प्रदर्शनमा ध्यान दिएका छैनन्, तिनीहरू हराउन जारी राख्छन्।
यो एक समतल-लाइनर दृष्टिकोण हो जसमा लगानीमा कुनै प्रतिफल हुँदैन। यो औसत उत्पादनको साथ असेंबली लाइन हो।
दोस्रो रणनीति जुन हामी धेरै एजेन्सीहरू परिमार्जन गर्छौं त्यो हो आवाज को साझा or वेब उपस्थिति रणनीति। यसमा सामग्री र पदोन्नति समावेश छ, नियमहरूको साथ यो हुन्छ कि तपाई इनबाउन्ड लीडहरूको अधिक स्वामित्व लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं अधिक लेख्नुहोस् र यसलाई बढि बढुवा गर्नुभयो भने। Ack ... के समय को बर्बादी। पक्का, तपाईंको आवाजको साझा बढ्दै तपाईं अधिक नेतृत्व प्राप्त गर्दछ। म सामूहिक उत्पादन र पदोन्नति को रणनीति poo-pooing मा छैन, तर यो एक धेरै ठूलो अवसर हराइरहेको छ।
यो एक रैखिक दृष्टिकोण हो लगानीमा फ्लैट-लाइनर प्रतिफलको साथ। यो उही औसत उत्पादनको साथ छिटो असेंबली लाइन हो।
के हुन्छ यदि तपाईं कम सामग्री लेख्न सक्नुहुनेछ जुन बढी अर्थपूर्ण थियो, यसलाई बढावा दिन सक्नुहुनेछ र माग बढाउनुहोस्? यसैले हामीले हाम्रो विकास गरेका छौं सामग्री अधिकार दृष्टिकोण ग्राहकहरु संग यो असेंबली लाइनलाई गति दिइरहेको छैन र तेल परिवर्तन आउट गर्दैछ। यो रेस कार बनाउँदैछ र त्यसपछि पिडमा तान्न प्रत्येक पटक तपाईंले सिसा गुमाउनुभयो।
यो लगानी मा एक बढ्दो प्रतिफल संग एक पुनरावृत्ति दृष्टिकोण हो। यो एक प्रिमियम उत्पादनको साथ एक ढिलो विधानसभा लाइन हो जुन धेरै राम्रो बिक्री गर्दछ।
पछिल्लो रात म उपस्थित भएँ बिग डाटा सम्मेलन यहाँ इंडियानापोलिस मा। उपस्थितिमा एक ग्राहक थियो जसले हामीले वर्षौं सेवा गरेका थियौं जब सम्म उनीहरू नयाँ मार्केटि management व्यवस्थापन ल्याउँदैनन्। त्यो मार्केटिंग प्रबन्धकको घटना व्यवस्थापनमा पृष्ठभूमि थियो र वेबसाइटमा एक भित्रि बिक्री प्लेटफर्मको सट्टा ब्रोशरको रूपमा बढी हेर्यो। उनले हाम्रो सगाई कट्यो र कम्पनीले पछि खोज र सामाजिक मार्फत यसको अधिक अधिकार गुमायो।
यसको बाबजुद पनि, कम्पनीका विक्रेताले कुनै श doubt्का बिना, भने इन्फोग्राफिक श्रृंखला जुन हामीले कम्पनीको लागि विकास गरेका थियौं3वर्ष पहिले अझै वेब मार्फत योग्य नेतृत्वको उनीहरूको सबल स्रोत थियो। त्यो प्रोग्रामको प्रकार हो जुन हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौं। तपाईं आज अधिक तिर्नुहोस्, तर तपाईं समय मा तेजी बाट राम्रो परिणाम प्राप्त!
टैग: सामग्री प्राधिकरणसामग्री उपस्थितिसामग्री उत्पादनसामग्री रणनीतिइन्फोग्राफिक श्रृंखलावेब उपस्थिति
म चाहन्छ कि मार्केटरहरू यसो भन्न बन्द गर्नुहोस् ...
बजुल: ब्रान्ड अधिवक्ता र प्रभावकारीहरूको साथ अभियानहरू कार्यान्वयन
मई 9, 2015 मा 5: 45 एएम
धेरै उपयोगी जानकारीको साथ उत्कृष्ट साइट डगलस।
मैले भर्खर तपाईको साप्ताहिक न्यूजलेटरको सदस्यता लिएको छु।
मई 11, 2015 मा 3: 48 PM